Seenaa Abbaa Caalaa Gabaabaatti!! Admasuu Biraanuu malee QOPHIIN DHANGAAN Dhangaa hin fakkatu! OROMOON ARTIISTI GUDDAA DHABE! – gamtaa site
Seenaa Abbaa Caalaa Gabaabaatti!! Admasuu Biraanuu malee QOPHIIN DHANGAAN Dhangaa hin fakkatu! OROMOON ARTIISTI GUDDAA DHABE!
Bara 1994-95 ture hoggantoonni Televizyiniin Ethiopia sagantaan bashananaa Afaan Oromoo, Tigree fi Amaaraan hatattaaman akka eegalan ajjajan.
Afaan Amaaraa muuxannoo waggaa 36 waan qabuuf maneen tiyaatiraa finfinnee keessa waan guutaniif Qophii 120 jedhamu eegaluuf hin rakkannee ture.
Afaan Tigree QIDAM MISAANAA kan jedhu eegaluuf hedduu rakkoon hin ture..barri isaanuma harkaa waan jiruufi.
Rakkoon guddaan silaa kan qunamuu irra ture Afaan Oromooti. Afaan Oromoo TV dhaaf haaraa ta’uu qofa otoo hin taanee Artistoonni Diraamaa, baacoo fi qophii bashannanaa hojjatan Finfinnee keessaa argachuun hedduu cimaa waan tureef.
Haata’u malee QOPHII BASHANNANAA AFAAN OROMOO akka qopheessu itti gaafatummaan atattama kan itti kennamee Gazexeessaa beekamaa Samu’eel Dhaabaa yoosuu xiyyeeffannaa isaa Oromoota Manneen Tiyaatiraa Habashaa keessa hojjanii fi Gaazexeessitoota Qophii Ijoollee warra qopheessan irratti ture.
Artistoota Samu’eel Dhaabaa yeroo sana xiyyeeffannaa guddaa kenneef keessaa artisti ADMAASUU BIRAANUU, TAADDASAA CUQQEE, MULUGEETAA BAALCHAA FI MARTAA ture.
Wayita sanas Artisti ADMAASUU BIRAANUU mana tiyaatiraa mana qopheessaa magaalaa Finfinnee keessa hojjataa ture. ETV illee achuma ture.
Kanaaf artisti Admaasuu Birhaanuu warra duraa ETV Qophii bashannanaa Dhangaaf artistoota dafanii birmatan keessaa isa duraati.
Artiisti Admaasuu Biraanuu rakkoo ogeessa arti Qophiin Dhangaa qabuuf dafee daqabuu qofa osoo hin taane, dargaggoota Oromoo fedhii artii qaban, warreen Qophii bashananaa sanarratti hirmaachuu barbaadaniif muxxannoo qabuun heddu gargaaree.
Hirmaannaa artisti Admaasuu Birhaanuu fi kan birootiin TUUTNI DHANGAA kan jedhamu miseensota gara 30 qabu ijaaraman.
Artisti Admaasuu Biraanuu Oromiyaa (walloo dabalatee) mara irra naana’uun Diramaa fi taphoota agarsiisaa tureen dawwatoota biratti heddu jaalatame.
Qophiin Dhangaa ADMAASUU BIRAANUU keessa hin jirre DHANGAA miti namoonni jedhan ni turan.
Admaasuu Biraanuu waltajjii daawwii agarsiisu irratti, of jijjiru irratti hedduu beekamaadha. Gaafa tokko hoteela naannoo Nifaas silkiitti WAARDIYAAN hoteelichaa KADHATAAN as seenuu hin danda’u jedhee balbala irratti dhorkuu isaa har’a illee nan yaadadha.
Artiin Oromoo iddoo hin jirree ka’ee sadarkaa amma gahu irra akka dadhabu gummachu guddaa kan keennan keessa Artisti Admaasuu Biraanuu isa hangafa.
Artsti Admaasuu Birhaanuu, waara akkuma isaa boqotan kan akka CAALTUU WALDAYASII fi TAADDASAA CUQQEE wajjin yeroo ummata fulduratti bahan, otoo isaan Diraamaa/tapha/goofata hin jalqabin ummanni fuuluma isaanii ilaalanii gammadaa fi kolfuu eegalu ture.
Artist Admaaduu Biraanuu ilma isaa Amenti Megersa yeroodhuma sana Qophii Dhangaatti dabaluun faana isaa akka hordofu taasiise. Amantiins kunoo Filmii addaa addaa hojjachaa akka jiruu fi Youtube Channel Ame Finfinne-Tube jedhamu hundeesuun Vidiyoo Oromoo ilaalatanii fi Diraamaa Abbaan Isaa Hojjete Gama Hawaasa biraan ga’uu irratti hakaniif guyyaa carraqaa jira akkasumaas Artiistoota biyyaa keessa jiraan duuba ta’uun ogummaa isaatiin tajaajilaa jira galanni Admaasuuf haata’u malee.
Duraan Diyirektarii gara boodaa ammoo Qopheessaa Qophii Dhangaa ta’ee yeroon Artisti Admaasuu Biraanuu fi TUUTA DHANGAA wajjin dabarse yeroon yaadadhu addunyaa kana irraa BOQOCHUUN artist ADMAASUU
BIRAANUU heddu nagaddisiisa.
Haata’u malee dandeetii fi fedhii Artisti Admaasuu Biraanuutiin har’a waggaa 15-16 boodaa ADMAASUWWAAN heddu dirree ARTII irratti bobbuun artiin Oromoo sadarkaa amansiisaa irra gahuu yeroon arguu heddun gammada. Galanni guddaan Admaasuu fi waa’ilota isaatiif haata’uti.
Artisti Admaasuu boqotu illee hojiin isaa diroo dhaloota dhufu wajjin jiraata.
Waa’ee Admaasuu Biraanuu barreeffama gabaabaa kanaan fixuu hin danda’u. Yeroo biraan itti deebi’a. Sababiin isaa waltajiilee inni irratti hojjetee fi diraamaa, Filmiin inni keessa jiru lakkawamee hin dhumu waan ta’eef
Dhumarratti lubbuun Admaasuu Biraanuu nagaan akka boqottu, boolla isaas daadhiin akka guutu, warra isaatiif ammoo Waaqayyoon sarbii akka kennun hawwaa.
By Dejene Gutema
← Situations in #Ethiopia,…